12 ဥရောပမှာကြည့်ရှုရန်ထူးခြားသောတိရိစ္ဆာန်များ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 12 ဥရောပမှာကြည့်ရှုရန်ထူးခြားသောတိရိစ္ဆာန်များ
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရုရှားခရီးသွားရုရှား, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထား Travel တူရကီ, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်: 8 မိနစ်များ
ရောင်စုံ, ထူးခြားဆန်းပြားသော, နှင့်အင်္ဂါရပ်များနှင့်ကျက်စားရာနေရာအတွက်ထူးခြားသော, မင်းတို့တွေ့လိမ့်မယ် 12 တိရိစ္ဆာန်များဥရောပ၌တွေ့မြင်ရန်အများဆုံးထူးခြားတဲ့တိရိစ္ဆာန်များ. အနက်ရှိုင်းဆုံးသမုဒ္ဒရာ၌နေသော, အမြင့်ဆုံးအဲလ်ပ်တောင်တန်း, သို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်ဥရောပသစ်တောများ၌အနားယူ, သင်၏ဥရောပထွက်ခွာထွက်ခွာချိန်တွင်ဤအံ့သြဖွယ်ရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များကိုစောင့်မျှော်နေရန်သေချာသည်.
ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးခရီးသွားမှအများဆုံးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. ဤဆောင်းပါးသည်ရထားခရီးသွားအကြောင်းကိုပညာပေးရန်စာဖြင့်ရေးသားခဲ့သဖြင့်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည် တစ်ဦးကရထား Save, ကမ်ဘာပျေါမှာစျေးအချိုဆုံးရထားလက်မှတ်တွေဝက်ဘ်ဆိုက်.
1. ဥရောပမှာကြည့်ရှုရန်ထူးခြားသောတိရိစ္ဆာန်များ: ဥရောပ Lynx
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သည်, ပြင်သစ်, အီတလီ, နှင့် Czech Republic, ဥရောပ Lynx ဟာတမူထူးခြားတဲ့တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ပါ. Lynx မှာအမြီးတိုရှိတယ်, အစက်အပြောက်နှင့်အတူအညိုရောင်သားမွေး, နှင်းဖုံးနေသောဆောင်းတွင်းသစ်တောတွင်ရှာဖွေရန်အလွန်လွယ်ကူသည်.
ဤတောရိုင်းကြောင်သည်အိမ်မွေးကြောင်တစ်မျိုး၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်မျိုးစိတ်တစ်ခုကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်, နှင့်ရိုင်းပြောက် cheetah.
ဥရောပမှာဥရောပ Lynx ကိုဘယ်မှာတွေ့နိုင်မလဲ?
အဆိုပါ ဘာသာစကား Bavarian သစ်တော Lynxes နဲ့သူတို့ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်တွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အတွက်အံ့သြစရာကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုပါ.
မြူးနစ်သို့ Dresden တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူ
2. ဥရောပမှာကြည့်ရှုရန်ထူးခြားသောတိရိစ္ဆာန်များ: Puffin
ဒီလှပတဲ့သတ္တဝါတွေကိုAprilပြီလလယ်လောက်ကစပြီးကမ်းရိုးတန်းကမ်းပါးတွေမှာတွေ့နိုင်တယ်. ဥပမာ, West Wales ရှိ Skomer ကျွန်းသည်တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်နှင့် Puffin ဓာတ်ပုံပညာအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်. ဖြည့်စွက်ကာ, Brittany ကမ်းရိုးတန်းသည်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာကြက်ငှက်တုပ်ကွေးလေးစားရန်အခြားအံ့ဖွယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်.
Puffins အထိရောက်သည် 30 အရှည်စင်တီမီတာနှင့် 20 အမြင့်စင်တီမီတာ. ထို့အပြင်, မျက်စိမှာလိမ္မော်ရောင်နှုတ်သီးနှင့်စက်ဝိုင်းနှင့်အတူ, သူတို့သည်ဤလှပသောပင်လယ်ငှက်များကိုသမုဒ္ဒရာကမ်းပါးများပေါ်တွင်တွေ့ရန်အလွန်လွယ်ကူကြောင်းသင်တွေ့လိမ့်မည်. နှင့် 90% ဥရောပတိုက်တွင်တစ်ခုလုံးကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူ ဦး ရေ၏, ဥရောပကမ်းရိုးတန်းများမှကိုလိုနီတစ်ခုလုံးကိုတစ်နှစ်တာလုံး ၀ မ်းသာကြည်နူးနိုင်သည်.
ဥရောပမှာ Puffins တွေကိုဘယ်မှာတွေ့နိုင်မလဲ?
ပြင်သစ်ရှိ Brittany ကမ်းရိုးတန်းနှင့် Skomer ကျွန်းတို့သည် Puffin ကိုမြင်နိုင်သည့်နေရာကောင်းဖြစ်သည်.
3. ဥရောပမှာကြည့်ရှုရန်ထူးခြားသောတိရိစ္ဆာန်များ: ဆိုင်း
ဆိုင်းဂျိုင်းသည်ထူးခြားသောမြေပုံတစ်ခုဖြစ်သည်, ကံမကောင်းသဖြင့်, ယနေ့ခေတ်မျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိသည်. အဆိုပါ Saiga တစ်ခုဖြစ်သည် 12 သငျသညျဥရောပ၌တွေ့မြင်အများဆုံးထူးခြားတဲ့တိရိစ္ဆာန်များ. ၎င်း၏ပုံမှန်မဟုတ်သောနှာခေါင်းနှင့်အတူ, ဤထူးခြားသောတိရိစ္ဆာန်သည်အအေးနှင့်ပူသောရာသီဥတုများနှင့်အလွယ်တကူအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်, နှာခေါင်းရဲ့ပုံစံကဒီရည်ရွယ်ချက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကတည်းက.
ထိုကွောငျ့, ဆိုင်းဂါတွင်အမြဲတမ်းနေအိမ် မရှိ၍ ပြောင်းရွှေ့နိုင်သည် 1000 နွေရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီအကြားကီလိုမီတာ. ထို့အပြင်, တစ်နေ့လျှင်ကီလိုမီတာများစွာလမ်းလျှောက်နိုင်သည်။ တစ်နေ့တာ၏အများအားဖြင့်လှုပ်ရှားသည်. အဆိုပါ Saiga နှင့်ပတ်သက်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်မှာအပင်များနှင့်မြက်ပင်အပြင်, အခြားတိရိစ္ဆာန်များသို့အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောအပင်များကိုစားသည်.
ဥရောပမှာရှိတဲ့ Saiga ကိုဘယ်မှာတွေ့နိုင်မလဲ?
4. ဥရောပမှာကြည့်ရှုရန်ထူးခြားသောတိရိစ္ဆာန်များ: ထင်းရှူး Marten
အကယ်၍ သင်သည်ဥရောပသစ်တောများနှင့်သစ်တောများကိုဖြတ်သန်း။ သွားလာနေပါကထူးခြားသော Pine Marten နှင့်သင်တွေ့နိုင်သည်. Pine Martens သည်သစ်ပင်တွင်းထဲ၌နေထိုင်ပြီးကောင်းမွန်သောတောင်တက်သမားများဖြစ်သည်, ဒါကြောင့်ဒီအထူးသတ္တဝါကိုမြင်ချင်ရင်ရှာကြည့်ပါ.
ထင်းရှူးပင်များသည်သစ်အယ်သီး - အညိုရောင်အရောင်ရှိသည်, လည်ပင်းတဝိုက်အလင်းအဝါရောင် bib နှင့်အတူ. ထို့ကြောင့်ပင်သစ်တော၌တည်၏, သစ်ပင်တစ်ပင်တွင်သစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ်ရှိဤစိတ်ဝင်စားဖွယ်တိရစ္ဆာန်ကိုလက်လွတ်ရန်ခဲယဉ်းလိမ့်မည်, ကြောင်းအဝါရောင် bib နှင့်အတူ.
ထင်းရှူး Martens ကိုဘယ်မှာရှာရမလဲ?
စကော့တလန်နှင့်အိုင်ယာလန်ရှိကုန်းမြင့်ဒေသများ, Pine Marten ကိုကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးနေရာများဖြစ်သည်.
5. ဥရောပမှာကြည့်ရှုရန်ထူးခြားသောတိရိစ္ဆာန်များ: ဥရောပစိမ်းလန်းသော Lizard
တွင် 40 အရွယ်အစားစင်တီမီတာ, ဥရောပအစိမ်းရောင်ပုတ်သင်ညိုတစ်ကောင်ကိုလက်လွတ်ဖို့တကယ်ခက်လိမ့်မယ်. ဒီထူးခြားတဲ့ပုတ်သင်ညိုတစ်ကောင်ဟာအစိမ်းရောင်နောက်ကျောနဲ့အဝါရောင်ဝမ်းရှိပါတယ်. စိတ်ဝင်စားစရာ, မိတ်လိုက်ရာသီအတွင်း, အထီးအရောင်အတွက်အပြာရောင်အပြာရောင်ပြောင်းပါ.
Green Lizard သည်မြင့်မားသောအမြင့်တွင်နေထိုင်သည် 2000 မီတာ, ဒါကြောင့်, သငျသညျသြစတြီးယားတောင်ပေါ်တက်တက်နေစဉ်, ပတ်ပတ်လည်ကြည့်ဖို့သေချာပါစေ. ဆောင်း ဦး ရာသီမှဆောင်းရာသီသို့သင်ခရီးသွားနေလျှင်, ထို့နောက်သင်ဤဂူတိုင်များကိုဂူများနှင့်ခြောက်သွေ့သောပုန်းခိုရာနေရာများတွင်တွေ့လိမ့်မည်. သို့သျောလညျး, နွေရာသီမှာ, မတ်လကနေစ, ဒီအလှအပတွေဟာနေရောင်ထဲမှာနွေးနေလိမ့်မယ်.
Green Lizard ကိုဘယ်မှာတွေ့နိုင်မလဲ?
ဒီအစိမ်းရောင်ပုတ်သင်ညိုတစ်ကောင်ဟာနေပေါ်မှာကျောက်ပေါ်မှာထိုင်နေတာကိုတွေ့နိုင်တယ်, ဥရောပတစ်လွှား, သြစတြီးယား, ဂျာမနီ, ရိုမေးနီးယားအထိ, နှင့်တူရကီ.
6. ဥရောပမှာကြည့်ရှုရန်ထူးခြားသောတိရိစ္ဆာန်များ: ပန်းရောင် Flamingo
လှပသောပန်းရောင် flamingos သည်တစ်နေရာတွင်နေထိုင်သည် အကောင်းဆုံးတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်သဘာဝသိုက်များ ဥရောပမှာ. ပန်းရောင် flamingos သည်ပြင်သစ်ရှိ Camargue အရံတွင်ရိုင်းစိုင်းသောမြင်းများနှင့်အတူနေထိုင်သည်. ပန်းရောင် flamingo သည် Camargue ၏သင်္ကေတဖြစ်လာသည်, ၎င်း၏တက်ကြွပန်းရောင်အရောင်များကို.
ဂူထဲမှာ, နယ်မြေ, သို့မဟုတ်တက်ပျံ, သူတို့ရဲ့အလှအပချွတ်ဖေါ်ပြခြင်း, ပန်းရောင် flamingo အတော်လေးအံ့ sight ဖွယ်မျက်မှောက်ဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျမှတဆင့်လမ်းလျှောက်အဖြစ်4အဆိုပါ Camargue အတွက်လမ်းကြောင်း, ဒီငှက်သည်ဘာကြောင့်တစ်ခုဖြစ်သည်ကိုသင်လျင်မြန်စွာနားလည်လိမ့်မည် 12 ဥရောပမှာကြည့်ဖို့အများဆုံးထူးခြားတဲ့တိရိစ္ဆာန်များ.
Camargue Reserve ရှိပန်းရောင် Flamingo ကိုဘယ်မှာတွေ့နိုင်မလဲ?
ကင်မရီးသည်ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ကြီးမားသောသဘာ ၀ သိုက်ဖြစ်သည်. ဒီထူးခြားတဲ့ငှက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်, ဦး ခေါင်း Ornithological ပန်းခြံ.
လိုင်ယွန်တစ်ရထားနှင့်အတူ Toulouse ရန်
တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူ Toulouse မှပဲရစ်
ရထားနှင့်အတူ Toulouse ဖို့ nice
Bordeaux မှရထားနှင့်အတူ Toulouse သို့
သင်အိုင်ယာလန်၏တောင်ဘက်တွင်ရွက်လွှင့်ခံရဖို့ဖြစ်ပျက်လျှင်, တစ်နေရာရာအကွာအဝေး၌တည်၏, တစ် ဦး knobbly ခေါင်းကိုရေအောက်ထဲကနေပေါ်လာလိမ့်မယ်. ဤသည် Humpback ဝေလငါးဖြစ်နိုင်သည်, အိုင်ယာလန်တဝိုက်သမုဒ္ဒရာ၌နေထိုင်သောခမ်းနားခြင်းနှင့်ကြီးမားသောဝေလငါး.
သူတို့ရဲ့အထင်ကြီးခြင်းနှင့်ခြိမ်းခြောက်အရွယ်အစားနေသော်လည်း, 12-16 မီတာ, သူတို့သည်အန္တရာယ်ကင်းပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့ကြသည်. ဤလှပသောဝေလငါးများသည်ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်ရောက်ရှိလာသည်, သူတို့ရဲ့ရှုပ်ထွေးသောသီချင်းတွေကိုသီဆို, တည်မြဲသည် 10-20 မိနစ်များ.
Humpback Whale ကိုဘယ်မှာတွေ့နိုင်မလဲ?
စကော့တလန်, အိုင်ယာလန်, အင်္ဂလန်သည်ဝေလငါးကြည့်ခြင်းအတွက်အလွန်ကောင်းသည်.
8. ဥရောပမှာကြည့်ရှုရန်ထူးခြားသောတိရိစ္ဆာန်များ: ဝံပုလွေများ
စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်ကြောက်စရာ, ဝံပုလွေများသည်ဥရောပရှိအန္တရာယ်ရှိသောတိရိစ္ဆာန်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်. ဤထူးခြားသောတိရိစ္ဆာန်များသည်မည်သည့်နေရာသို့အလွယ်တကူမဆိုလိုက်လျောညီထွေရှိနိုင်သည်, သူတို့ရဲ့ပြောက်ကျားအရောင်များအတွက်, နှင့်အရွယ်အစားကြီးမားသော. ဝံပုလွေမျိုးကွဲများစွာရှိသည်, ဒါပေမယ့်ပျမ်းမျှအားဝံပုလွေအထိရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် 70 ကီလိုဂရမ်.
ဝံပုလွေတွေဟာတောထဲမှာနေတယ်, အထုပ်ထဲမှာ, နှင့်ဥရောပအတွက်အလွန်အမင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်တိရိစ္ဆာန်များထည့်သွင်းစဉ်းစား. ဝံပုလွေများကိုကာကွယ်ရန်နှင့်၎င်းတို့အားလုံးဝမျိုးသုဉ်းခြင်းမရှိစေရန်အကောင်းဆုံးအခြေအနေများနှင့်ထိန်းသိမ်းရန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာများနှင့်သိုလှောင်ထားရှိပါသည်.
အီတလီရှိ Liguria ဒေသ, Bavarian အဘိဓါန်သစ်တော, နှင့်ပိုလန်ဝံပုလွေဖြစ်ကြသည်’ ပိုမိုနှစ်သက်သောနေရင်းဒေသများ.
9. ဥရောပမှာကြည့်ရှုရန်ထူးခြားသောတိရိစ္ဆာန်များ: လင်းပိုင်
အီတလီကမ်းရိုးတန်း၏ရေ၌ splashing နှင့်သီချင်းဆို, လှပသောလင်းပိုင်များသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမြင်ကွင်းဖြစ်သည်. လူတိုင်းသည်ဖြစ်ကောင်းဓာတ်ပုံများအတွက်လင်းပိုင်မြင်ကြပြီနေစဉ်, ရေပန်းခြံများ, သို့မဟုတ်ဥရောပ၌တိရစ္ဆာန်ရုံ, ဤလှပသောသတ္တဝါများအားရွက်လွှင့်ခြင်း၊.
အဆိုပါ လှပသော Cinque Terre ၏ကမ်းရိုးတန်း နှင့် Ligurian ပင်လယ်သည်အီတလီရှိရိုင်းလင်းပိုင်များကိုတွေ့မြင်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်.
la Spezia သည်ရထားနှင့်အတူ Riomaggiore သို့
Florence မှရထားနှင့်အတူ Riomaggiore ရန်
တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူ Riomaggiore မှ Modena
Livorno တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူ Riomaggiore ရန်
လူအများစုကြားတဲ့အခါ “ငါးမန်း” သဘာဝအလျောက်တုံ့ပြန်မှုမှာတုန်ခါခြင်းနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတို့ဖြစ်သည်. သို့သျောလညျး, ကြီးမားသော Basking Shark သည်အရွယ်အစားကြီးမားပြီးခြိမ်းခြောက်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ဒီငါးမန်းကပဲ plankton ကိုစားတယ်.
ထိုကွောငျ့, အဲ့ဒီပတ်ပတ်လည်မှာသင်လုံးဝလုံခြုံမှုရှိတယ်လို့ခံစားနိုင်ပါတယ် 12 အသံ 12 မီတာငါး. Basking Shark သည်ယူကေတွင်ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်သည်, နှင့်အကောင်းဆုံးနွေရာသီအတွက်ချောက်ထဲကနေမြင်ကြပြီ. ဒါကြောင့်, သင်ကြီးမားတဲ့တြိဂံတောင်နှင့်မီးခိုးရောင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမြင်ရလျှင်, ထို့နောက် hello လှိုင်းပုတ်ပြီး Basking Shark ကိုဖမ်းယူပါ.
Basking Sharks Inn UK ကိုဘယ်မှာတွေ့နိုင်မလဲ?
Cornwell ကမ်းခြေချွတ်, Men ၏ကျွန်း, နှင့်အင်္ဂလန်အနောက်ဘက်ကမ်းအများအပြား, သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်လှောင်နေသည့်ငါးမန်းများကိုသင်တွေ့နိုင်သည်.
11. ဥရောပမှာကြည့်ရှုရန်ထူးခြားသောတိရိစ္ဆာန်များ: Wolverine
mess, mess, လက်တင်အတွက် wolverine ရဲ့အမည်ပြောင်ဖြစ်ပါတယ်, Gluten သို့ဘာသာပြန်ထားသော. ဤထူးခြားသောအမည်မှာ Mustelidae မိသားစုတွင်အကြီးဆုံးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည် – သူတို့တစ်တွေပုံမှန်မဟုတ်သောကြီးမားသောအစာစားချင်စိတ်ရှိသည်ကတည်းကperfectlyုံ.
ဒီအတွက်ကြောင့်, ဝူဗာရီရင်သည်အစားအစာရှာဖွေရန်ဝေးဝေးသွားနိုင်သည်, ယခုဥရောပတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်.
ယေဘုယျအားဖြင့်, အဆိုပါ wolverine လူ ဦး ရေအာရုံစူးစိုက်သည် ရုရှားမှာ, အဆိုပါ Taiga, နှင့်အာရှ. ထို့အပြင်, wolverines တွေကိုလည်းတွေ့နိုင်တယ် ယူကေရှိကုန်းမြင့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်.
12. ဥရောပမှာကြည့်ရှုရန်ထူးခြားသောတိရိစ္ဆာန်များ: Alpine Ibex
မြင့်သည်မှာ 4000 မီတာ, နှင်းဖုံးတောင်ထိပ်များအကြား, ကျောက်ဆောင်ရန်, သင် Alpine Ibex ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်. မှကြီးထွားနိုင်ကြောင်း ဦး ချိုများနှင့်အတူ 140 စင်တီမီတာ, ဤတောင်ဆိတ်သည်ဥရောပရှိအထင်ရှားဆုံးနှင့်ထူးခြားသည့်တိရိစ္ဆာန်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်.
ပထမဦးစွာ, ဥရောပအဲလ်ပ်တောင်တန်းနေထိုင်သော, အဆိုပါ Alpine Ibex, Basking Sharks နှင့် Green gremard များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိရန်မလွယ်ကူပါ. အပြင်, သူတို့၏ခွခွံများသည် Ibex အတွက်ကျောက်တောင်အဲလ်ပ်များမှသားကောင်များကိုတက်ပြီးလွတ်မြောက်ရန်လွယ်ကူစေသည်.
Alpine Ibex ဘယ်မှာတွေ့နိုင်မလဲ?
အီတလီ Alps နှင့် ဆွစ်ဇာလန်အဲလ်ပ်တောင်တန်း အနည်းငယ်ရှိ အံ့သြဖွယ်ရှုထောင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် Alpine Ibex စောင့်ကြည့်သည်.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်စောင့်ကြည့်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာများသို့ခရီးစဉ်စီစဉ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါလိမ့်မည်. ဥရောပတစ်ခွင်ရထားခရီးစဉ်သည်ဥရောပရှိဤထူးခြားသောတိရစ္ဆာန်များ၏သဘာဝနေရင်းဒေသများသို့သွားရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
သင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကို“ ဥရောပတွင်ကြည့်ရှုရန်ထူးခြားသည့်တိရိစ္ဆာန် ၁၂ ခု” ကိုသင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်တင်ချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Funique-animals-europe%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, သင် / fr မှ / es သို့မဟုတ် / က de နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#တိရိစ္ဆာန်များ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး တိရိစ္ဆာန်များ MostUniqueAnimalsInEurope ထူးအိမ်သင်
ဥရောပအိပ်မက်ကိုတွေ့ကြုံခံစား:5မဖြစ်မနေ - လည်ပတ်နိုင်ငံများ
ကားသွားလာရေးသိကောင်းစရာများ, ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂရိနိုင်ငံ, ရထား Travel အီတလီ, ဥရောပခရီးသွား, အိုက်စလန်သို့သွားပါ
အီတလီနိုင်ငံရဲ့တစ်ဖက်မှာတစ်ဦးကရထားခရီးစဉ်များအတွက် Pack ရန်ကဘယ်လို
ရထားခရီးသွားခြင်း, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား